Izinto ezingu-10 ubudala: Ukunakwa, ulwazi olubalulekile
Kudingekile ukuqhuba ukuhlolwa kwezingubo ku-wardrobe okungenani kanye ngonyaka. Ngaphandle kokuzisola, hlukana nezinto ezilahlekelwe ukubukeka kwazo okukhangayo. Ungakhohlwa ukukhipha izingubo ezingafanelanga iminyaka yakho.
Izinto ezibukeka zikudala
Ama-t-shirts ngemibhalo ebhaliwe, ama-rhinestones, ama-patches. Ezingubo ezinjalo, ngisho nentombazane encane izobukeka ingenangqondo. Futhi uma isihloko esibucwebe sigqoka owesifazane osemdala, lesi siqeshana sezingubo sizokwengeza kuyo eminye iminyaka embalwa.
Izinto ze-shades emhlabeni. Umbala ohlaza okwesibhakabhaka, u-marsh, umbala ompunga-obomvu, obomvu uhlinzeka ubuso bubukeka obubi. I-gamma enjalo izogcizelela imibimbi nemibuthano ngaphansi kwamehlo.
Izinto zesikhumba. Izembatho ezenziwe ngesikhumba semvelo noma ezenziwe ngeso lengqondo zibukeka zimangalisayo kuphela kumantombazane okubukeka komfanekiso. Umfanekiso wesifazane ovamile, isibonelo, izibhulukwe zesikhumba kuphela zizokwehlisa.
Izembatho ezenziwe nge-velvet ne-satin. Kulukhuni kakhulu ukuhlanganisa ngokufanele imidwebo enjalo, kungabi yinkomba. Owesifazane ozama ijaji ye-velvet, ngokushesha uyenezela iminyaka engu-5-10. Ungazami ezinye izindwangu "ezicebile": i-lurex, i-lace, i-brocade. Abagcini nje kuphela, kodwa bagcizelele konke ukungaphumeleli kwesibalo.
Izikhwama zebhizinisi. Ikhodi yokugqoka yaseHhovisi ibeka imithetho ethile, ngokusho ukuthi ungagqoka yini izigaba eziqinile kuphela. Kodwa uma ungafuni ukubukeka njenge-heroine ye-movie ethi "Office Romance", ungathengi i-suit yokuqala yebhizinisi. Khetha amakhondomu asesimeni asondelene nawo angaphuli inani le-figure. Khumbula ukuthi izikhwama zombala ongashadile sezivele zingaphandle kwefashini. Ukuze ungabonakali udala kuneminyaka yakho, hlanganisa isiketi esimnyama nesigqoko sokukhanya noma ngokuphambene nalokho.
Ama-Hoodies nezinto ezidlulile. Izingubo ezingenakuqhathaniswa akuzona neze ezincane. I-sweater eboshiwe noma igqoko "elivela ehlombe lomunye umuntu" liphuca lesi sibalo futhi lithatha amamitha amaningana okukhula. Shiya lezi zinto ku-cottage.
Izikhwama ziyi "mini" futhi "maxi". Isiketi esezansi sisiza ukufihla amaphutha we-figure. Kulokhu, izinzuzo zayo ziphela. Le ngubo yenza isithombe sibe nzima kakhulu futhi sikwenza sibe sesikhulile. I-mini kumuntu omdala, ngokuphambene nalokho, ubukeka engacabangi futhi enonya kakhulu. Uma ungaphezu kuka-40, susa iziketi ezifushane ngokushesha.
I-bijouterie ngamatshe amakhulu, ama-headphones. Uma ulahla izinto eziguga, ungakhohlwa ukubheka ibhokisi lezinongo. Imfashini yezimpahla zokuhlobisa ivele idlulile. Ukubeka esihlokweni sekhanda, khumbula ukuthi uzifaka ngokwakho eminyakeni embalwa. Ikakhulukazi iphathelene namasongo amakhulu, amacici nemigexo. Qaphela ngamapharele. Ngaphambi kwezigcawu yena uhlotshaniswa namadodakazi aseBalzac.
Izintambo ezincane zezintambo nezinhlamvu. Abanye besifazane bakholelwa ukuthi izesekeli ezinjalo zizosiza ukufihla imibimbi entanyeni. Kodwa empeleni izinhlayiya ezincane zigcizelela kuphela iminyaka ekhulile. Ngaphezu kwalokho, i-handkerchief encane eboshwe ngefoshini izokukwenza ube njengomsizi wendiza we-60 noma isisebenzi sebhange.
Izigqoko ezidakayo. I-headpiece ingakuguqula kalula owesifazane osemusha abe yinkosikazi eminyakeni. Thatha izigqoko ngezimbali, izibambo kanye nemifudu. Izitayela zemikhiqizo kanye namamodeli afanelekayo ekugijimeni kwamahhashi, futhi, ungabandakanyi esicelweni sosuku zonke.
Ihembe elimhlophe: ukuthenga kuphi, ukugqoka kanjani, nokuthi yini ongayifaka
Izindwangu zamakhosikazi ezifashisayo, i-Autumn-Winter 2015-2016: izithombe zezingubo ezifakwe emfashini ezenziwe ngezimoto zika-2016
Yisiphi isitayela sezingubo zokukhetha ukuhlunga?
Inhliziyo isetshenziswe ngamakhukhamba aqoshiwe
Uyini umkhonto we-speleocamera?
Indlela yokubhekana nesizungu akusona owesifazane osemusha
Umbuso wokuzivocavoca - ukufaneleka komzimba
Pink noma blue?
Ukungabi nesifiso sobulili kwabesifazane
I-Appendicitis nokubonakaliswa kwayo
Imodeli evelele Yasmin Gauri
Kungani izingane zisencane kabi?
Amakhukhi e-Linzer ase-Austria